China Hdpe Geomembrane ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | ဟောင်ကောင်
HDPE geomembrane (မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ polyethylene geomembrane) သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော polyethylene virgin resin ကိုအသုံးပြုသည်။ ၉၇.၅% ၏အဓိကပါဝင်သည်။ ၄ င်း၏ ၂.၅% ကာဗွန်အနက်ရောင်၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှု၊ anti-oxidant, uv absorber and stabilizer ကိုအသုံးပြုသည်။ Tai'an Taidong သည် Ultra width automatic HDPE antiseepage geomembrane ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ GRI စံနှုန်းများနှင့် ASTM စစ်ဆေးခြင်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်အားလုံး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ချောချောမွေ့မွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောမျက်နှာပြင်များ၊ ၀.၁၀ မီလီမီတာမှ ၄.၀ မီလီမီတာမှ ၄.၀ မီလီမီတာ၊ အကျယ် ၁၀ မီတာအထိမြင့်မားပြီး HDPE geomembrane သည်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး၊ ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ မြူနီစီပယ်အင်ဂျင်နီယာ၊ ရှုခင်း၊ ရေနံဓာတု, သတ္တုတွင်း, ဆား, စိုက်ပျိုးရေး, ငါးမွေးမြူရေး။
2. မြင့်မားသောဖြတ်ခံနိုင်ရည်, ခိုင်မာတဲ့ပုံပျက်သောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။
၃.Puncture ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အိုမင်းခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ ဆီနှင့်ဆားနှင့်ချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ရေကောင်းရေသန့်၊ ရေနုတ်မြောင်း၊ ရေစိုခံဆန့်ကျင်မှုနှင့်စိုစွတ်သောဒဏ်ခံနိုင်သောဆိုးကျိုးများ။
အမှတ် စမ်းသပ်မှုကို item နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ
အထူ (မီလီမီတာ) ၀.၅၀ ၀.၇၅ ၁.၀၀ ၁.၂၅ ၁.၅ ၂.၀၀ ၂.၅ ၃.၀၀
1 သိပ်သည်းမှု g / m2 > 0.94 > 0.94 > 0.94 > 0.94 > 0.94 > 0.94 > 0.94 > 0.94
2 ဆန့်ထုတ်စွမ်းအား (MD & TD) (N / mm) > 8 > 11 > 15 > ၁၈ > ၂၂ > ၂၉ > ၃၇ > ၄၄
3 ဆန့်ကျိုးနိုင်စွမ်း (MD&TD) (N / mm) > ၁၃ > ၂၀ > ၂၇ > ၃၃ > ၄၀ > ၅၃ > 67 > ၈၀
4 အထွက်နှုန်းမှာ elongation (MD&TD) (%) > 12 > 12 > 12 > 12 > 12 > 12 > 12 > 12
5 b-eak (MD&TD) တွင်% elongation (%) > 700 > 700 > 700 > 700 > 700 > 700 > 700 > 700
6 Tear Resistance (MD&TD) (N) > ၅၈ > ၉၃ > 125 > 160 > 190 > 250 > 315 > 375
7 ထိုးဖောက်နိုင်မှုစွမ်းအား (N) > 160 > 240 > 320 > 400 > 480 > 640 > 800 > 960
8 ဆန့ဝန်စိတ်ဖိစီးမှုကွဲအက် (ခွဲစိတ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ဆန့နည်းလမ်း) ဇ > 300 > 300 > 300 > 300 > 300 > 300 > 300 > 300
9 ကာဗွန်အနက်ရောင်ပါဝင်မှု (%) 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0
10 ၈၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူအိုမင်းခြင်း (90d ပြီးနောက်လေထု OIT ထိန်းထားနိုင်မှု) (%) > ၅၅ > ၅၅ > ၅၅ > ၅၅ > ၅၅ > ၅၅ > ၅၅ > ၅၅
11 ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှု (၁၆၀၀ နာရီအသာစီးပြီးနောက် OIT ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်း) > ၅၀ > ၅၀ > ၅၀ > ၅၀ > ၅၀ > ၅၀ > ၅၀ > ၅၀
12 ကာဗွန်အနက်ရောင်ပျံ့နှံ့ ဒေတာ (၁၀) ခုတွင်အဆင့် (၃)၊ အဆင့် (၄.၅) ကိုခွင့်မပြုပါ
13 Oxidative သော Induction အချိန် (မိနစ်) လေထု oxidative သော induction အချိန်≧ 100
မြင့်မားသောဖိအား oxidative သော induction အချိန်≧ 400
၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေး (ဥပမာမြေဖို့ခြင်း၊ မိလ္လာသန့်ရှင်းရေး၊ အဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများသန့်စင်စက်ရုံ၊ အန္တရာယ်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ၊ စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပေါက်ကွဲမှုစွန့်ပစ်စသည်)
၂) ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး (ထိုကဲ့သို့သောစိမ့်ဝင်မှုကာကွယ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်း၊ အားဖြည့်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ခြင်းစသည့်တူးမြောင်းများ၏အမာခံနံရံ၊ ဆင်ခြေလျှောကာကွယ်မှုစသည်)
(၃) မြို့တွင်းအလုပ်များ (မြေအောက်ရထား၊ အဆောက်အအုံများနှင့်ခေါင်မိုးရေလှောင်ကန်များ၏မြေအောက်လုပ်ငန်းများ၊ ခေါင်မိုးဥယျာဉ်များစိမ့် ၀ င်ကာကွယ်ခြင်း၊ မိလ္လာပိုက်များ၏နံရံစသည်တို့)
4. ဥယျာဉ်ခြံ (အတုကန်၊ ကန်၊ ဂေါက်ကွင်းကန်အောက်ခြေတန်း၊ ဆင်ခြေလျှောကာကွယ်မှုစသည်)
5. ဓာတုဗေဒစက်ရုံ (ဓာတုစက်ရုံ၊ သန့်စင်စက်ရုံ၊ ဓာတ်ငွေ့သုံးဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း၏စိမ့်စိမ့်ထိန်းချုပ်ရေး၊ ဓာတုဓာတ်ပြုမှုအကြံပေးအဖွဲ့၊ အနည်ထိုင်သည့်အရံနံရံ၊ အလယ်တန်းနံရံစသည်တို့)
၆။ သတ္တုတူးဖော်သည့်လုပ်ငန်း (အောက်ခြေတန်းများရေလျှံနေသောရေကန်၊ အမှိုက်အမှိုက်များ၊ ပြာခြံ၊ ဖျက်သိမ်းနိုင်သောရေကန်၊ အနည်ထိုင်ကန်၊ အမှိုက်ပုံ၊ နောက်ခံကန်စသည်) ။
၇။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း (ရေလှောင်ကန်များ၊ သောက်ရေကန်များ၊ သိုလှောင်ကန်များနှင့်ဆည်မြောင်းစနစ်များကိုစိမ့်ဝင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်း)
၈။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း (ငါးကန်၊ ပုစွန်ကန်၊ ပင်လယ်သခွားလုံး၏လျှောလျှောကာကွယ်မှု)
၉။ ဆားလုပ်ငန်း (ဆားပုံရေကူးကန်၊ ဆားရည်အိုင်အဖုံး၊ ဆားဂျီအမ်ဘမရာ၊ ဆားရေအိုင် geomembrane)
နောက်တစ်ခု: DIMPLE ရေနုတ်မြောင်းဘုတ်အဖွဲ့
TP-ပြင်ဆင်ချက် S က
acrylic waterproof Coating, Flexible Polymer အမျိုးအစား-ဘိလပ်မြေ waterproof Coating , ကွန်ကရစ်သည် Polyurethane Coating , Tpo ရေစိုခံအမြှေးပါး, Single-သက်တမ်းထပ်တိုးခေါင်မိုးအမြှေးပါး , ရေတပ်စခန်း Polyurethane waterproof Coating ,